Terpin Hydrate/Codeine (ကိုဒင်း) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Terpin Hydrate/Codeine (ကိုဒင်း)
terpin hydrate/codeine ကို မည်သည့် အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
terpin hydrate/codeine ကို သလိပ်ထွက်၍ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊ အအေးမိ၍ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်၍ ချောင်းဆိုးခြင်း စသည်တို့အတွက် အများဆုံး အသုံးပြုသည်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် နာတာရှည် (သို့) ခဏတာ အဆုတ်လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ လေပြွန်နာကျင်ခြင်း၊ အသံနာခြင်း စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသည်။
terpin hydrate/codeine ကို ဘယ်လို သောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
terpin hydrate/codeine ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည့် အချိန်အတိုင်း၊ ပမာဏအတိုင်း ပါးစပ်မှ သောက်ပါ။
၎င်းဆေးသည် အိပ်ငိုက်တတ်သဖြင့် စက်ယန္တရားများ၊ ယာဉ်များ မောင်းနှင်မည် ဆိုလျှင် သတိထားရန်လိုသည်။
terpin hydrate/codeine ကို ဘယ်လိုသိုလှောင် သိမ်းဆည်း ထားသင့်ပါသလဲ။
terpin hydrate/codeine ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့ရန်၊ မစိုစွတ်မှုမရှိစေရန် သိမ်းဆည်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းခြင်း မဖြစ်စေရန် ရေချိုးခန်းတွင်း သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ terpin hydrate/codeine ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသည့် ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးဘူးအခွံတွင် ပါသည့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းခြင်းမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
terpin hydrate/codeine ကို အိမ်သာတွင်း ပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းကို မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့လျှင်၊ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားလျှင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ဆေးဝါးများအား စနစ်တကျ မည်သို့ စွန့်ပစ်ရမည် ဆိုသည်ကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
terpin hydrate/codeine ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
terpin hydrate/codeine တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင် (ဆေးအညွှန်းတွင် အချက်အလက်များ အသေးစိတ်ပါဝင်သည်)
အခြားဆေးဝါးများ၊ အစားအစာများ၊ ဆိုးဆေးများ၊ တာရှည်ခံစေရန် ပြုလုပ်ထားသောအရာများ၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်
terpin hydrate/codeine နှင့်တွဲသောက်လျှင် ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ရောဂါများရှိလျှင်၊ ဆေးဝါးများသောက်သုံးနေလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကလေးနို့တိုက်နေချိန် သုံးစွဲလျှင် ဘေးကင်းပါသလား။
terpin hydrate/codeine ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာ စမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီ ဖြစ်နိုင်ခြေ ကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန် သင့်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ terpin hydrate သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ခြေအဆင့် D ရှိပြီး codeine သည် C ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
terpin hydrate/codeine က ဘယ်လို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
တခြားဆေးများကဲ့သို့ terpin hydrate/codeine တွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိပါသည် အများစုမှာ မဖြစ်ပွားတတ်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲကုသခြင်းများ မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် ဆေးသောက်ပြီး ပြသနာတစုံတရာ ရှိပါက သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
အချို့ဆိုးကျိုးများမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ရေငတ်သလိုခံစားရခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဆီးသွားရန်ခက်ခြင်း၊ ဆီးနည်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း သို့ နှေးခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ မတ်တပ်ရပ်စဉ် သွေးပေါင်ကျခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။
Codeine ကို တစ်နေ့လျှင် ၂၄၀မှ ၅၄၀ မီလီဂရမ်နှုန်းဖြင့် တာရှည်သောက်လျှင် ဆေးစွဲသွားနိုင်သည်။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက terpin hydrate/codeine နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ။
terpin hydrate/codeine သည် သင်ယခု သောက်သုံးနေသည့် တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသည့် ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် သို့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို ဟန့်တားသည့် ဆေးများဖြစ်သော morphine၊ antidepressants၊ အိပ်ဆေးများ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးများ၊ cimetidine စသည့် ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Terpin hydrate/codeine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Terpin hydrate/codeine အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်မလာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိ မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါတွေဟာ Terpin hydrate/codeine နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုရှိသလဲ
Terpin hydrate/codeine သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနျေနှင့် ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အောက်ပါရောဂါများရှိလျှင် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အသက် ၃၀ လအောက် ကလေးများ
ပန်းနာရင်ကျပ်၊ အဆုတ်လေဝင်ခြင်း စသည့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနေရာတွင် အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ terpin hydrate/codeine ဆေးမသောက်သုံးမီ ဆရာဝန်နှင့်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဖြစ်စေ အမြဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ terpin hydrate/codeine ကို သောက်သုံးရမည့် အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
hydrate/codeine နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ ထောက်ခံမှုပြုထားသည့် ဆေးပမာဏသည် တခါသောက် တပြားနှုန်းဖြင့် တနေ့လျှင် ၂ကြိမ်၃ကြိမ်သောက်ရန်ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်တွေမှာ hydrate/codeine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
hydrate/codeine နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။ အောက်ပါ ပမာဏများသည် ကလေးများအတွက် ထောက်ခံမှုပြုထားသည့် ဆေးပမာဏဖြစ်သည်။
အသက် ၃၀လအထက် ကလေးများ ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းသောက်ရန်။
အသက် ၃၀အောက် ကလေးများသုံစွဲရန် မညွှန်ပါ။
terpin hydrate/codeine ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ ရရှိနိုင်မလဲ။
terpin hydrate/codeine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ terpin hydrate နှင့် Codeine phosphate ၁၀ မီလီဂရမ် ပါဝင်သော ဆေးပြား အနေဖြင့်။
အရေးပေါ်အခြေအနေတွေ၊ ဆေးပမာဏ လွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဆေးပမာဏ လွန်သွားသည့် အခြေအနေများတွင် အရေးပေါ် ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှု ခံယူပါ။
terpin hydrate/codeine ဆေးကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့လျှင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံး သောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုလျှင် လွတ်သွားသည့်အကြိမ်ကို ကျော်၍ ပုံမှန်အချိန်တွင်သာ သောက်သုံးပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။
Terpin hydrate/codeine. http://www.ndrugs.com/?s=terpin%20hydrate;-%20codeine. Accessed September
Terpin hydrate/codeine. http://www.medicinenet.com/terpin_hydratecodeine-/article.htm. Accessed
Terpin hydrate/codeine. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-32597/terpin-hydrate-oral/details. Accessed
Terpin hydrate/codeine. http://www.druginfo.info/categories/1908-TERPIN-HYDRATE-CODEINE. Accessed